သီချင်း Record လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီအရာ (၃) ခုမရှိဘဲ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ BLACKPINK's Lisa
BLACKPINK’s Lisa ကတော့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အသံသွင်းခါနီးရင် သူမရဲ့ခေါင်းထဲမှာတွေးနေတတ်တာကတော့ အရေးကြီးတဲ့အရာ (၃) ခုပါပဲ။ Zach Sang Show မှာတော့ သီချင်းအသံသွင်းခါနီးရင် Lisa လုပ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေးကို မေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်အဖြေလေးကတော့ တကယ်ကို ရိုးရှင်းပြီး Lisa ပီသလွန်းလှပါတယ်။
မေးခွန်းက “အသံသွင်းတဲ့အခန်းထဲမဝင်ခင် ဘာတွေပြင်ဆင်တတ်လဲ? ပြင်ဆင်သွားတတ်လား? လုပ်နေကျအရာဘာညာပေါ့? အသံသွင်းရင် ဝတ်နေကျအဝတ်အစားမျိုးတို့? ဒီတိုင်းခေါင်းကို ရှင်းပြီး သီချင်းသွင်းတာလား?” ဆိုပြီး မေးခဲ့တာပါ။ Lisa က “အသံသွင်းဖို့ သိပ်အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။
အဝတ်အစားပိုင်းဆိုရင် ရိုးရိုး sweatpants နဲ့ ဖိနပ်ဆိုရင် slipper ပဲ စီးတယ်။ အပေါ်ကနေ အပိုပစ္စည်းပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေ မလိုပါဘူး။ sweatpants နဲ့ ကျွန်မရဲ့ slippers က အဓိကပါပဲ။ ဒီ ၂ ခုအပြင် နောက်ထပ်လိုတဲ့တစ်ခုက စားဖို့ပဲ။ အသံမသွင်းခင် ‘Hey… ဗိုက်ဆာလိုက်တာ.. ဗိုက်ဆာလိုက်တာ။
ငါ တစ်ခုခုမှာစားလို့ရလား?’ အဲ့လိုပေါ့ မေး‌ပြီး စားလေ့ရှိတယ်။ ဗိုက်ဖြည့်ပြီးမှ အသံသွင်းတယ်။ ဗိုက်ဟောင်း‌လောင်းနဲ့ အသံသွင်းဖို့ဆိုတာ ကျွန်မအတွက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” လို့ အရေးအကြီးဆုံး အရာ (၃) ခုကို ပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်။
Lisa ကတော့ သူမရဲ့ sweatpants, slippers နဲ့ စားစရာ… ဒီ (၃) ခုသာရှိရင် ဘာလုပ်ရလုပ်ရ အိုကေစိုပြေပုံပါပဲ။ အသံသွင်းတိုင်းလည်းလည်း ဒီအရာ (၃) ခုကို လိုအပ်တာဖြစ်လို့ LiLi ကတော့ ရိုးရှင်းအေးဆေးစွာနဲ့ပဲ အလုပ်ပြီးအောင် လုပ်နိုင်တယ်လို့တောင် သတ်မှတ်ရပါတော့မယ်နော်။
Next အသက် (၃၀) ပြည့်ပြီးသား တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် BL မင်းသားချောများ »
Previous « အက်ရှင်​ဇာတ်ကြမ်းတွေထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး အရိုဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ​​နဲ့ ပရိသတ်​တွေကို ရင်ခုန်​​စေခဲ့တဲ့ K-drama စုံတွဲ (၅) တွဲ